Xildhibaan Mahad Salaad oo raaligeliyey Sh. Kiinyaawi – Kalfadhi
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa ka raaligiyey Sheekh Sh. Maxamed Ibraahim (Kiinyaawi) hadal uu maalin ka hor ku soo qoray bartiisa Feysbuugga, oo uu ku durayey Qudbad Diimeed uu wadaadku ku qaban lahaa maanta Garoonka Kubadda Cagta Banaadir ee magaalada Muqdisho. Xildhibaanka ayaa qudbadda wadaadkaas, oo uu todobaadyo balaminayey, waxa uu geliyey shaki ah iney siyaasadeysan tahay, oo siyaasiyaanta qaar ee dalka lagu taageerayo.
Xildhibaan Mahad Salaad waxa uu Sheekh Kiinyaawi ka dalbaday xafis, kadibna waxa uu ku yiri “cafis iyo masaamax abti. Adigana wixii dhankeyga kaasoo gaaray ka raali noqo”. Intaas waxa uu Xildhibaan Mahad Salaad ku soo daabacay boggiisa Feysbuugga, wuxuuna Sheekh Kiinyaawi isna aqbalay raaligintaas, isaga oo wareysiinayey TV maxali ah.
Waxaa, isaga oo si la mid ah Xildhibaanka oranaya ABTI, uu sheegay in laga been abuurta Xildhibaan Mahad Salaad, oo ay waxba kama jiraan tahay wararka sheegaya in hadalkii uu ka yiri muxaadaradiisa maanta loo fasiran karay hanjabaad isaga ka dhan ah. “Wax ka jira ma leh, wuuna ka weyn yahay inuu qof insaan ah u hanjabo” ayuu yiri Sh. Kiinyaawi. “Wax dhibasto ah oo uu ii geystay malaha, aad baana u jeclaha isaga inta kaleba, waxa dhexdeena la dhigayna waan cafiyey” ayuu Sh. Kiinyaawi raaciyey hadalkiisa.
Wararka la xiriira inuu Xildhibaan Mahad Salaad u dhigay si ka duwan sida uu Sh. Kiinyaawi sheegtay, iney muxaadaradiisa uu u yimid Muqdisho ay tahay, waxay ku faafeen warbaahinta gudaha oo dhan. Waxaana hadalkaas uu saameyn yeeshay markii ay dowladdu isgarab taagtay wadaadka, si ay ugu sahlanaato qudbadihiisa Muqdisho, taas oo marka laga soo tago Xildhibaanka ay dad badan oo kale u fasireen iney Madaxda Dowladdu lug ku leeyihiin arrinkaas, oo ay imaanshiyaha iyo muxaadarada ciwaankeedu yahay “Cafi Walaalkaa” ay siyaasadeysan tahay.